Brilliant Light Co Ltd မြန်မာအိမ်ခြံမြေ ၀က်ဘ်ဆိုက် | ShweProperty.com
Brilliant Light Co,Ltd
01500219 , 012304268, 012305704, 095096876,09956454062, 09422656428, 09767096453
No.(16/A), Room (2), Ma Kyee Kyee Street, Sanchaung Township, Yangon
ကွန်ဒို အငှား ကွန်ဒို အရောင်း
တိုက်ခန်း အရောင်း ခြံအရောင်း
လုံးချင်းအိမ် အရောင်း ဂိုထောင် အရောင်း
လုံးချင်းအိမ် အငှား စက်မှုဇုန်
ဆိုင်ခန်း အရောင်း ဆိုင်ခန်း အငှား
စာချုပ်စာတမ်း လချုပ်၊နှစ်ချုပ် အငှား
အိမ်ခြံမြေ အတိုင်အပင်ခံ အိမ်ခြံမြေ တန်ဖိုးဖြတ်ပေးခြင်း
Sales, Marketing and Leasing, on behalf of both landlords and tenants / purchasers (exclusive and non-exclusive)
About Brilliant Light Co,Ltd
Brilliant Light Co,Ltd ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ရောင်းရန် - အလုံမြို.နယ် နှင်းဆီကုန်းလမ်းအနီးတွင် ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကွန်ဒိုအလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါကေးခင်း...Advertised by Mon Mon…
280,000 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 9016 sqft00
အလုံမြို.နယ် နှင်းဆီကုန်းလမ်းအနီးတွင် ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိပါသည်
ဧရိယာ : 9016 sqft
Asking Price : 280,000 သိန်း
01500219 , 012304268, 012305704, 095096876
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ကြွေခင်း,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
350 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 625 sqft00
စမ်းချောင်မြို့နယ် ဓမ္မက၀တီလမ်း တွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
420 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 625 sqft01
စမ်းချောင်မြို့နယ် ဇေယျသုခလမ်း တွင်တိုက်ခန်းရောင်ရှိပါသည်။
ငှားရန် - ကမာရွတ်မြို. နယ် ကန်လမ်း မ တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
တိုက်ခန်းကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ...Advertised by Mon Mon…
18 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1170 sqft11
ကမာရွတ်မြို. နယ် ကန်လမ်း မ တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ဧရိယာ : 1170 sqft
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို.နယ် ပြည်လမ်းမ ဟံသာဝတီးအ၀ိုင်အနီး တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ကြွေခင်း,လုပ်ငန်းရ,လျှာထိုးခင်း,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
14 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 750 sqft01
စမ်းချောင်းမြို.နယ် ပြည်လမ်းမ ဟံသာဝတီးအ၀ိုင်အနီး တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Asking Price : 14 သိန်း
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ကြွေခင်း,လျှာထိုးခင်း,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
2,800 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 750 sqft01
ငှားရန် - ဗဟန်းမြို.နယ် ပုလဲ ကွန်ဒို တွင် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ကွန်ဒိုဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master…...Advertised by Mon Mon…
14 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1780 sqft33
ဗဟန်းမြို.နယ် ပုလဲ ကွန်ဒို တွင် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ဧရိယာ : 1780 sqft
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို.နယ် ဗဟိုလမ်းတွင် Twin centro condo ငှားရန်ရှိပါသည်။
ကွန်ဒိုစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
2,300 USD(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1800 sqft33
စမ်းချောင်းမြို.နယ် ဗဟိုလမ်းတွင် Twin centro condo ငှားရန်ရှိပါသည်။
တိုက်ခန်းလှိုင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
500 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 625 sqft21
လှိုင်မြို.နယ် မြနန္ဒအိမ်ယာလမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို.နယ် သုမင်္ဂလာလမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
လုံးချင်းအိမ်တောင်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးRC ခင်း,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
850 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 935 sqft01
တောင်ဥက္ကလာပမြို.နယ် သုမင်္ဂလာလမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
ဧရိယာ : 935 sqft
ငှားရန် - ကျောက်တံတားမြို. နယ်တွင် Mini Condo အမြန်ငှားရန်ရှိပါသည်။
ကွန်ဒိုကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
800 USD(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1250 sqft32
ကျောက်တံတားမြို. နယ်တွင် Mini Condo အမြန်ငှားရန်ရှိပါသည်။
ငှားရန် - စမ်းချောင်မြို့နယ် မကြီးကြီးလမ်းတွင် တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး...Advertised by Mon Mon…
330,000 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 750 sqft11
စမ်းချောင်မြို့နယ် မကြီးကြီးလမ်းတွင် တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။
Asking Price : 330,000 သိန်း
1,150 USD(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1080 sqft21
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်လမ်းအနီးတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ဧရိယာ : 1080 sqft
ငှားရန် - တာမွေ မြို.နယ် ဗညာဒလလမ်းမပေါ် တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
တိုက်ခန်းတာမွေ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး...Advertised by Mon Mon…
8 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 562 sqft10
တာမွေ မြို.နယ် ဗညာဒလလမ်းမပေါ် တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ဧရိယာ : 562 sqft
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်မြို့နယ် ဗဟိုလမ်းမပေါ်တွင်တိုက်ခန်းရောင်ရှိပါသည်။
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ကြွေခင်း,New…...Advertised by Mon Mon…
500 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1080 sqft21
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်ချယ်၇ီကွန်ဒိုတွင်ကွန်ဒိုငှား၇န်၇ှိသည်။
ကွန်ဒိုစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါကေးခင်း,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
18 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 2100 sqft44
ရောင်းရန် - ကျောက်မြောင်းမြို.နယ် စင်္ကြာလမ်းတွင် လုံးချင်း အိမ်ရောင်ရန်ရှိပါသည်။
လုံးချင်းအိမ်တာမွေ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ကြွေခင်း,အုတ်ခက်,ဂျိုးဖြုရေ,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
5,500 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1920 sqft01
ကျောက်မြောင်းမြို.နယ် စင်္ကြာလမ်းတွင် လုံးချင်း အိမ်ရောင်ရန်ရှိပါသည်။
ဧရိယာ : 1920 sqft
ငှားရန် - မရမ်းကုန်မြို.နယ် သမိုင်းဘူတာရုံမှတ်တိုင်အနီး တွင် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,Overhead…...Advertised by Mon Mon…
5 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1250 sqft31
မရမ်းကုန်မြို.နယ် သမိုင်းဘူတာရုံမှတ်တိုင်အနီး တွင် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
ငှားရန် - စမ်းချောင်မြို့နယ် ​ဝေဠုဝန်​လမ်း mini condo ရောင်းရှိပါသည်။
မီနီကွန်ဒိုစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master…...Advertised by Mon Mon…
7 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1752 sqft22
စမ်းချောင်မြို့နယ် ​ဝေဠုဝန်​လမ်း mini condo ရောင်းရှိပါသည်။
ဧရိယာ : 1752 sqft
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်မြို့နယ် တရုတ်ကျောင်လမ်းတွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
တိုက်ခန်းစမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ထပ်ခိုး,လျှာထိုးခင်း,Own…...Advertised by Mon Mon…
780 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1250 sqft11
Asking Price : 780 သိန်း